Musharax shaaciyay waxa kordhiyay Qaraxyada Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa sheegay in dayaca uu Farmaajo amniga dayacay inay keentay korarka Qaraxyadda magaalada Muqdisho.
"Waxaa muuqata in Dowladdu ay si buuxda u dayacday amnigii guud ee dalka gaar ahaan midkii Caasimadda bilihi lasoo dhaafay, taasoo sababtay iney si weyn usoo xoogeystaan falalka argagixisada. Waxaana taas marqaati u ah falalkii dhacayey mudooyinkii isbuucyadii dhaafay," ayuu yiri Guuleed.
Al-Shabaab ayaa bishan kaliya Caasimadda ka fulisay in ka badan 10 Qarax, oo miino u badnaa, kuwaasoo ay ku dhinteen Mas'uuliyiin iyo dad kaloo shacab ahaa, sida Laamaha Amniga ay sheegeen.
Markii la gaaro kala-guurka, waxaa caado ah inay Madaxda xilka haysa ay ku mashquulaan doorashadda iyo sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen, iyadoo la iska illoobo mas'uuliyaddii qaranka, gaar ahaan amniga.
Al-Shabaab oo ka faa'idaysanaysa Mashquulka madaxda ee doorashadda indhahooda kusii jeedaan, ayaa kordhisay Qaraxyadda ay ku laynayso dadka ku jira dowladda iyo kuwa indhaha u ah bulshadda.
Waxaa ugu dambeysay Maanta, oo Qarax ka dhacay meel u dhaw Beexaani lagu dhaawacay labo Xildhibaan oo hore, islamarkaana lagu dilay ugu yaraan 3 Askari oo ilaalo u ahayd oo Gaari nooca Hiluz dusha ka furan saarnaa.